Turkiga oo ka qayb qaadanysa dhisida laamaha Garsoorka Soomaaliya (Sawirro) – Radio Muqdisho
Turkiga oo ka qayb qaadanysa dhisida laamaha Garsoorka Soomaaliya (Sawirro)
Sii hayaha Wasiirka Wasaaradda Caddaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Faarax sheekh Cabdiqaadir ayaa booqasha ku jooga maalmahan magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga, ka dib markuu ka helay casuumaad rasmi ah dhigiisa Turkiya Mudane Bekir Bozdag
Waxaa booqashadan ku weheliyay Wasiirka ,Xeer Ilaaliyaha Qaranka Dr.Axmed Cali Daahir iyo xoghayaha joogtada ah ee Wasaaradda iyo Lataliyaal dhinaca sharciga ah.
Booqashadan oo qaadanaysa afar maalmood waxay labada dhinac kawada hadli doonaan xiriirka labada wasaaradood iyo in Wasaaradda Cadaaladda Turkigu ay ka qayb qaadato dhismaha laamaha Garsoorka Soomaaliya.
Wuxuu wafdigu booqan doonaa laamaha kala duwan ee Garsoorka dalka Turkiya sida Golaha Garsoorka, maxkamadaha. Xeer ilaalinta, kuliyada wasaaradda cadaaladda, iyo kuwa kale.
Sii hayaha Wasiirka Cadaaladda Faarax sheekh Cabdiqaadir ayaa dadaal dheer ugu jira sidii loo soo celin lahaa adeegga laamaha garsoorka heer federaal iyo mid degmooyinba, iyo waliba dayacrirka xarumaha Garsoorka, tayanta shaqaalaha.
Waxaa xusid mudan in dawlada Turkiya ay ka qayb qaadanayso dibu dhiska dalka, sida dayactirida xarumaha dawladda, waddooyinka iyo bixinta deeqo wax barasho.
Boqashada Wasiirka ayaa sare u qaadaysa saaxiibtinimada Soomaaliya iyo Turkiga oo wixii ka dambeeyay abaarihii 2011kii iyo boqashadii Rajab Dayib Erdogan ee Muqdisho inay gaadhay heerkii ugu sarreeyay balse caawinta Turkiga ee dhanka Garsoorka iyo Maxkamadaha ayaa ah mid u baahan in Soomaaliya ay ka faa’iidaysato si loo helo nidam garsoor hufan oo Soomaaliya ka hana qaada.
Hatem Ben Arfa oo Ku Biiray Kooxda Nice ee Dalka Faransiiska